I-petpals Franchisee Ithatha 'Isitoko' kanye Nezindawo Ezintsha! | Franchiseek
I-petpals Franchisee Ithatha 'Isitoko' kanye Nezindawo Ezintsha!
»I-petpals Franchisee Ithatha 'Isitoko' kanye Nezindawo Ezintsha!
Ukukhishwa Kwabezindaba - Ngokukhishwa Kwamanje
17 Agasti 2020
Izithombe: UDavid noSallyann Grey (Petpals Darlington, Yarm kanye neStockton)
I-petpals franchisee ithatha i-'stock' futhi ithenge insimu entsha
UDavid noSallyann Gray, abanikazi bePeter Darlington neYarm, enye yamasheya aphumelela kakhulu kunethiwekhi yePetpals futhi abawine umklomelo weTop Franchise ngo-2019 Petpals umklomelo wangaphakathi, muva nje bandise umbuso wabo wokunakekelwa kwezilwane, bathola iPetpals Stockton, ababenayo ngaphambili ethengiswe eminyakeni eyisishiyagalombili eyedlule.
Lo mbhangqwana okumanje uqasha abasebenzi abangaphezu kwama-20, manje usuzoba nezindawo ezihlanganisa amakhilomitha skwele angaphezu kwe-100 ukusuka entshonalanga neDarlington ukuya empumalanga yeStoton kumaTee. Le nsimu entsha, iPetpals Stockton, izohlinzeka ngezinsizakalo eziphelele zokunakekelwa kwezilwane ezifuywayo ePetpals, kubandakanya ukuhamba kwezinja nokugibela amabhasi, ukuvakasha kwamakati nokuhambela izilwane ezincane kanye nokugibela.
Umnikazi uDavid uthe,
'Phambilini besithengise iPetpals Stockton kuChristine Duncan emuva ngo-2012 ukuze sikwazi ukugxila kakhulu eDarlington naseYarm; ukuvala umnyango kwanika uSal nami isikhathi sokucabanga ngebhizinisi lethu futhi sobabili sanquma ngokuqinile ukuthi sifuna ukwandisa, ngakho-ke lapho uChristine ekhuluma ukuthi usekulungele ukuthengisa insimu, kwabonakala kuyimpendulo ebonakalayo ukuyithenga nokubuyisa emndenini. '
Ekhuluma ngokubamba kukaSallyann uthe,
'Bekulokhu kuhle ukuhlangana namanye amaklayenti ethu amadala esawashiya ebhizinisini eminyakeni eyisishiyagalombili edlule nanamuhla asengamakhasimende. Siyethemba ukuthi kuzoba noguquko olukhululekile njengoba uChristine ezosala eyimenenja yethu yokuhamba nezinja, kanye namalungu akhe amabili abasebenzi abasebenza njengamanje. '
Ephawula ngezinselelo ezenzeke ezinyangeni ezinhlanu ezedlule ngobhubhane lweCorona Virus uDavid uthe,
'Akungabazeki ukuthi lesi ngesinye sezikhathi ezinzima kakhulu empilweni yethu yamabhizinisi kepha yize amazinga ebhizinisi lawo wonke umuntu ehlile, siye saqhubeka nokuthola amaklayenti amasha njalo ngenyanga futhi sinethemba lokuthi sizobuyela emandleni ngokugcwele maduze. Sesisungule izimiso eziqinile eziphathelene nokunakekela izilwane ezifuywayo ngokuphepha ngesikhathi sodlame, kusuka kwizinyathelo zokuhlanzeka eziyisisekelo nokunikela ngezinhlelo zokuqoqa. Asishiyi engcupheni futhi sifuna ukuqinisekisa abantu ukuthi sibakhathalela kakhulu impilo yamakhasimende ethu, abasebenzi nezilwane ezifuywayo. '
'Ukuba yingxenye yenhlaka yezimali kusisize ngempela ekuphephiseni isivunguvungu se-COVID-19. Ukwesekwa esikutholile kwaNdlunkulu ngesikhathi sokuvalwa kwasemuva kwakukukhulu, kusenza sanolwazi mayelana nokuholwa kwakamuva okuvela kwa-DEFRA nakuHulumeni futhi nokusiqondisa ngezinketho zokusekelwa kwezezimali ezitholakalayo futhi, njengoba nje sinamandla okuthatha izingcingo siye kwelinye lamaFelpals Franchisees esikanye nawo. , ukuxoxa ngemigudu eya phambili, abasebenzi abasaxhuma, noma ukumane ulayishe futhi ube nengxoxo kusisize kakhulu; bekungaba nzima ukuhambela ngedwa. '
'UDavid noSallyann bayisibonelo esihle kuwo wonke ama-franchisees. Bazinikele nge-100% kubasebenzi babo, kumakhasimende abo, ezifuyweni futhi ekugcineni, ibhizinisi labo. Bangamanxusa amangalisayo wohlobo lwePhepals futhi banikela ngokungagodli ekusekeleni kwabo wonke umuntu okunethiwekhi, babelana ngolwazi lwabo nawo wonke umuntu.
'I-COVID-19 ibe yisikhathi esinzima kakhulu kwabaningi kepha njengakuqala uDavid noSallyann bathathe isikhathi eside, bazivumelanisa nezimo njengoba sonke sifunda ukusebenzisana nale' nto entsha ejwayelekile, '
IQEDA NGO-AUGUST 2020
I-petpals Darlington kanye ne-Yarm ne-petpals Stockton kuhlinzekwa ngeselula, ukunakekelwa kwezilwane ezifuywayo, kusuka ezilwaneni nasemakati kuya ezifuyweni ezincane isib. Onogwaja, ama-gerbils, izinyoni, ama-exotic
Izinsizakalo zePetpals Darlington neYarm nePetpals Stockton zibandakanya:
Abathintana noPretling Darlington kanye neYarm nePetpals Stockton bangathinta ku:
Oxhumana naye we-PR
Ibhokisi Elikhulu Elikhulu PR